END029 - I-OMG Pipeline Inspection Camera - I-22mm Lens, i-7-inch LCD (20m / 30m / 40m / 50m) - Izixazululo ze-OMG
END029 - Ikhamera Yokuhlola Amapayipi we-OMG ihlanganisa iphenyo ekhishwe ngekhamera ne-7, LCD qapha yokubuka indawo yokuhlola okunzima ukufinyelela kuyo. I-visor yelanga yesikhumba ye-deluxe inikeza ukubukwa okucacile ekuhloleni kwangaphandle nokuvikelwa okwengeziwe kwesilonda. Kuza necala eligcwele ngokugcwele eligcina wonke amakhithi ukuthuthwa nokusetshenziswa okulula. Kuqeda izidingo zokudiliza i-drywall ukuthola ukuvuza futhi kusiza ukuxazulula izinkinga zepayipi. Kumelwe ube nayo kunoma imuphi umninikhaya, usonkontileka kanye nabasebenza ngamapayipi abangochwepheshe!
isitayela: BOX Ikhamera
umsebenzi: UMBONO WOBUSUKU, Ukungena kwamanzi / Isimo sezulu
Ifomethi yeCompression Compression: H.264
Izinketho Zokugcina idatha: Ikhadi le-SD
Isicelo: Ngaphandle, ngaphakathi
Screen Usayizi: 7inch LCD Gada
Usayizi Wekhamera / Okubalulekile: 42MM * 22MM / insimbi engagqwali
512hz: Yakhelwe ku-512hz transmitter
Ibhalansi ezenzakalelayo: Yebo
Ishaja: I-AC100-240V DC12.6V
i-engeli yokubuka ikhamera: 145 °
Ikhebula ubukhulu: 4.9mm
umthombo wokukhanya kwekhamera: 12 PCS LED nge high ngenkathi ukukhanya (Adjustable)
Ubude bekhamera: 20M, 30M, 40M, 50M
Isitoreji: Ikhadi le-8G SD
Ukubuka okuphelele kwe-310 Ukubuka kwe-4 Namuhla